1 TIMỌTI 4 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1TI 4)
1 TIMỌTI 4
Ha ga-akụziri ndị mmadụ ozizi ụgha dị iche iche na-asị, na ọ bụ ihe jọrọ njọ mmadụ ịlụ di na nwụnye, ma ọ bụ ịta anụ ma ọ bụ iri ụfọdụ ihe oriri dị iche iche. Ma anyị maara na ọ bụ Chineke kere ihe ndị a, nye ha ndị Kraịst a kuziiri eziokwu ya ka ha rie, keleekwa ya nꞌihi ha.
rịọ Chineke ka ọ gọzie ya, nꞌihi na a na-eme ka nri ahụ bụrụ ihe dị mma site nꞌokwu Chineke na ekpere.
Ọ bụrụ na ị kọwaara ndị ọzọ ihe ndị a nke ọma, mee ka ụmụnna anyị mata ha, ị ga-abụ onye na-arụ ọrụ gị nke ọma, onye a na-esite nꞌokwukwe ị nwere, ya na ezi ozizi ọma nke ị naagbaso, na-azụju afọ.
Atụfula oge gị ịrụ ụka banyere akụkọ ifo nzuzu, na akụkọ na-abaghị uru nke ndị agadi nwanyị na-akọ. Kama jiri oge i nwere na ike i nwere na-azụ onwe gị.
Nke a bụ eziokwu ahụ nke onye ọ bụla kwesịrị ịnabatara onwe ya. Anyị na-adọgbu onwe anyị nꞌọrụ na-ahụjukwa anya ime ka ndị mmadụ kwere ya, nꞌihi na olileanya anyị dị nꞌime Chineke dị ndụ, onye nwụrụ ọnwụ nꞌihi mmadụ nile, nke ka nke nꞌihi ndị ahụ kweere na ya.
Na-ezi ihe ndị a, ma gbalịa ka ị hụ na onye ọ bụla matara ya nke ọma.
Tutuu ruo mgbe m ga-abịa nꞌebe ahụ, na-agụpụta ma na-akọwakwara ndị chọọchị ihe e dere nꞌime akwụkwọ nsọ. Na-ekwusakwa okwu Chineke.
Elelịla onyinye ime mmụọ nke i nwere anya, bụ nke e nyere gị site nꞌibu amụma nke pụtara ìhè mgbe ndị okenye chọọchị bikwasịrị gị aka nꞌisi.
Jiri onyinye ndị a nile rụọ ọrụ, ma nọgidesie ike nꞌọrụ gị, ka onye ọ bụla mata, hụkwa na ị na-eme nke ọma.
Na-elezi anya nꞌihe ị na-eche, na ihe nile ị na-eme. Nọgidesie ike nꞌụzọ ziri ezi. Chineke ga-agọzikwa gị, jiri gị nyere ndị ọzọ aka.
1 TIMỌTI 4:3
1 TIMỌTI 4:7
1 TIMỌTI 4:9
1 TIMỌTI 4:11
1 TIMỌTI 4:13
1 TIMỌTI 4:14
1 TIMỌTI 4:15
1 TIMỌTI 4:16
1 TIMỌTI 1 / 1TI 1
1 TIMỌTI 2 / 1TI 2
1 TIMỌTI 3 / 1TI 3
1 TIMỌTI 4 / 1TI 4
1 TIMỌTI 5 / 1TI 5
1 TIMỌTI 6 / 1TI 6